Teny fito: (2) – filazantsaramada
Teny fito: (2)
Publié parfilazantsaramada	 avril 25, 2012 mai 12, 2012 Laisser un commentaire sur Teny fito: (2)
« Dia hoy Jesosy taminy: anio no hihaonanao amiko any
Paradisa » Lioka 23:43
Teny nataon’i Jesosy tamin’ny iray tamin’ireo jiolahy roa niara nohomboana taminy io.
Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha dia nahantona amin’ny hazo ny olona voaozon’Andriamanitra na koa ny olona nanao ratsy; ary toa izany ireto olon-dratsy roa nahantona tamin’ny hazo ireto. Jesosy dia noheverin’ ny vahoaka fa voaozon’Andriamanitra, fa noheveriny ho niteny ratsy an’Andriamanitra tamin’ ny nilazany ny tenany hoe Andriamanitra Izy.
Nisy vehivavy maro tamin’ireo vahoaka betsaka nanaraka Azy no nitomany an’i Jesosy: notenenin’i Jesosy izy ireo mba tsy hitomany Azy fa hitomany ny tenany… Fihetsika matetika nataon’i Jesosy io: ny azo andraisana izany dia tian’i Jesosy ho ny olona no handray ho an’ny tenany ny nijalian’ny Tompo.
Ny niaretan’i Jesosy ny fijaliana dia ny hanasitranana antsika, ny hamonjena antsika. Ny tena zava-dehibe Aminy dia ny hahavoavonjy antsika.
MAHA-VERY ANY AMIN’NY HELO NY TSY FINOANA:
Ny jiolahy iray teo anilany dia niteny ratsy Azy sady naneso Azy sy nanao taminy hoe: tsy hianao va no Kristy? vonjeo ny tenanao sy izahay. Moa va tsy toa izany koa no nolazain’i Satana tamin’ny fotoana nakany fanahy an’i Jesosy, dia tamin’ilay Izy tany an’efitra, ka toa hoatran’ny nibaiko an’i Jesosy izy.
Io ilay Satana rain’ny lainga, izay mihevitra ny tenany ho mahay noho Jesosy ka nibaiko Azy ny amin’ny tokony hataony ho an’ny Tenany.
Tsy nahatsiaro ny tenany ity olon-dratsy ity, tsy nahay nanararaotra ny fisian’i Jesosy teo anilany. Nahatsiaro ny ho an’ny tenany ihany izy nefa toa nanome tsiny, toa naneso hoe tsy ho hain’i Jesosy ve ny hamonjy azy satria Jesosy aza miantona eo amin’ny hazofijaliana tahaka azy koa. Milaza ny tenany ho Andriamanitra nefa afa-baraka tahaka azy. Tsy nino intsony izy fa
mahay mamonjy azy Jesosy. Tsy nahatsiaro ny fiverenana tamin’An driamanitra ity olon-dratsy iray ity. Tsy nahatsiaro hibebaka izy.
NY TENA FIBEBAHANA MARINA:
Ny jiolahy faharoa kosa dia nahatsiaro ny tsy maha-rariny ny nanamelohana an’i Jesosy. Hoy izy: ‘fa ity lehilahy ity kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza’. Raha azo lazaina dia mahatsiaro ny tenany ho tsy mendrika ity lehilahy ity ary tsy sahy nanome tsiny an’i Jesosy, tsy sahy nanenjika an’ i Jesosy na dia kely akory aza izy, ny tenany no noheveriny fa
tsy mendrika ka mila famonjena. Hoy indrindra izy: ‘Jesosy ô! Tsarovy aho rehefa any amin’ny fanjakanao Hianao’. Nanaiky ny maha-Andriamanitra an’i Jesosy ity lehilahy ity, ary nino izy fa Mpanjaka tokoa Jesosy. Tena nitady famonjena marina ity lehilahy ity; nitady ny zavatra tsara dia ny fiverenana amin’Andriamanitra izy, ary tsy nisy zavatra hafa nanan-danja lehibe teo aminy ankoatra izao: te hahazo famonjena avy amin’Ilay afaka mamonjy
VOAVONJY IZAY TENA MIBEBAKA MARINA:
Toy izao no navalin’i Jesosy azy : ‘Lazaiko aminao marina tokoa: anio no hihaonanao amiko any paradisa’.
Raha tena mibebaka marina tokoa ianao anio, dia hovonjena ianao, aza mierikerika, aza mety ho voarebirebin’i Satana tsy hibanjina ny famonjena izay efa eo alohanao ianao, ka hitodika any amin’ny zavatra hafa indray. Ny Fotoana hamonjena: anio!
Ny Mpanome famonjena: Jesosy!
Ny toerana: eo izao!
Ho tanteraka aminao anie ny famonjen’ny Tompo Jesosy anio!
Publié parfilazantsaramada avril 25, 2012 mai 12, 2012 Publié dansUncategorized
Teny fito: (1)